I-Zirconia I-Ceramic Yarn Guide Yezimpahla Zamathuluzi China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-Zirconia I-Ceramic Components > I-Zirconia I-Ceramic Component > I-Zirconia I-Ceramic Yarn Guide Yezimpahla Zamathuluzi
Umhlahlandlela we-Zirconium oxide yoceramic yarneric wire guide ehamba phambili yoceramic wire guide kumashini ahlukahlukene we-textile. Izici ze-zirconia, ezinjengokugqoka kakhulu ukugqoka, ukuqhuma okuncane kakhulu nokuzigcoba, ukunyuka okuphansi kwe-thermal, nokulwa nokusebenza kwamakhemikhali, kusiza imishini ye-textile ithuthukise ukusebenza kwabo ukusebenza, ikhulise impilo yabo yesevisi futhi inciphise izindleko zokugcinwa okuningi.
Sinikeza umhlahlandlela ogcwele we-zirconia yocarn yarn for textile imishini, kuhlanganise nomhlahlandlela we-zirconia wokudla, umhlahlandlela we-ceramic eyelet, umhlahlandlela we-ceramic buncher, umhlahlandlela we-ceramic traverse nokunye okunye.
Ngomugqa wethu wokukhiqiza ngokunembile, singakwazi ukufeza isidingo esinamandla kakhulu futhi senze ukubekezelelana kube ngu-0.01mm ngamasayizi ayisihluthulelo. Futhi, inqubo evamile yokupholisa, siyakwazi ukwenza ukwanda kube ngu-Ra0.02.
● Ukugqoka okuphezulu kokugqoka
● Ukugqoka ukumelana kahle
● Akukho ukubola, anti-chemistry
● ukusebenza okungalinganiselwe